TV ကြောင့် အသက်တိုနိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » TV ကြောင့် အသက်တိုနိုင်
TV ကြောင့် အသက်တိုနိုင်
Posted by Zaw Wonna on Aug 17, 2011 in News, World News | 13 comments
အခုလက်ရှိ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ အဝလွန်ခြင်း၊ လေထုညစ်ညမ်းမှု၊ အာဟာရမပြည့်ဝမှု၊ ကင်ဆာ၊ AIDS စတဲ့ အသက်တိုစေတဲ့ အကြောင်းများစွာ ရှိတဲ့ အထဲမှာ အခုနောက်ထပ် အကြောင်းအရာသစ်တစ်ခု ထပ်တိုးလာပြန်ပါပြီ။
အချိန်ကြာမြင့်စွာ တီဗွီကြည့်ရှုလေ့ ရှိခြင်းဟာ အသက်တိုစေ ပါသတဲ့ ခင်ဗျာ။ တီဗွီကို တစ်နာရီလောက် ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် အသက်ကို ၂၂ မိနစ်လောက် တိုစေနိုင်ပါသတဲ့။ သဘောကတော့ တစ်နေ့ကို ၆ နာရီလောက် တီဗွီကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တသက်တာမှာ ၅ နှစ်လောက် စောပြီး သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။ British Journal of Sports Medicine မှာ သြစတေးလျက သုတေသီတွေ ဖော်ပြခဲ့တာပါ။
သဘာဝအားဖြင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ အသက်ရှည်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ထိုင်နေတဲ့ အချိန် ကြာမြင့်ခြင်း၊ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု နည်းပါးခြင်း တွေဟာ အသက်တိုမှုနဲ့ ဆက်စပ်နေကြောင်း ဒီအစီအရင်ခံစာကို ရေးသားသူ တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ Queensland တက္ကသိုလ်က Dr.Lennert Veerman က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ သြစတေးလျ နိုင်ငံသားတွေဟာ ပျမ်းမျှ တစ်နေ့ကို ၂ နာရီလောက် တီဗွီ ကြည့်ရှုလေ့ ရှိကြတဲ့အတွက် အမျိုးသားများမှာ ၁.၈ နှစ် နဲ့ အမျိုးသမီးများမှာ ၁.၅ နှစ်ခန့် အသက်တို ကြရပါသတဲ့။ အလားတူပဲ အင်္ဂလန်နဲ့ စကော့တလန်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ လေ့လာမှုတွေကလဲ တီဗွီကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အသက်တိုနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ မနှစ်တုန်းကလည်း သြစတေးလျနိုင်ငံက အခြား လေ့လာမှုတစ်ခုက တစ်နေ့ကို တစ်နာရီလောက် တီဗွီ ကြည့်ရှုခြင်းကြောင့် ၈% လောက် အသက်တိုမှု ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီသတင်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး စဉ်းစားမိတာကတော့ ကွန်ပြူတာကို မထတမ်း အသုံးပြုနေကြတဲ့ လူတွေမှာရော ဘယ်လို သက်ရောက်မှုမျိုး ရှိနိုင်မလဲ ဆိုတာပါ။ ပြီးတော့ ဒီတွေ့ရှိချက်အရဆို နောက်နောင် တီဗွီမှာ “ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည်” ဆိုတာမျိုး စာတမ်းထိုးသလို “တီဗွီကြည့်ခြင်းဖြင့် အသက်တိုစေနိုင်သည်” ဆိုတာမျိုး စာတမ်းထိုး ရမလားပဲ။ ခက်တာက တီဗွီ ဆိုတာကလည်း အခုခေတ်မှာ အိမ်တိုင်း မရှိမဖြစ် ဆိုတာလောက်ကို အရေးပါနေတော့ အသက်တိုကာမှ တိုရော၊ အနည်းဆုံး ဂြိုလ်တု သတင်းတွေ လောက်တော့ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်နေရဦးမှာပါ။ ။
That’s good news. Because, now in Japan, the TV broadcasting is changed to “digital” system.So, the TV at my home donsen’t work now.This time is to buy or not “new TV” for me. Stopping to buy is weighted by this post. Thanks!!!
Good idea! man. This change may also help your family more closer than before.
ညဘက်ဆို သီချင်းနားထောင်ရင် ၃နာရီလောက်ကြာတယ်။ တီဗွီကြည့်ရင် အသက်တိုတယ်ဆိုတော့ သီချင်းနားထောင်တာအကျုံးဝင်ပါသလား။
ဘာကြောင့်TVကြည့်ရင်အသက်တိုစေနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်လေးကောမပါဘူးလား… ဥပမာ TV ကဘာဖြစ်လို့ ညာဖြစ်လို့ စသည်ဖြင့်ပေါ့ အကြောင်းပြချက်လေးသိချင်ပါတယ် ….
(သဘာဝအားဖြင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ အသက်ရှည်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ထိုင်နေတဲ့ အချိန် ကြာမြင့်ခြင်း၊ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု နည်းပါးခြင်း တွေဟာ အသက်တိုမှုနဲ့ ဆက်စပ်နေကြောင်း ဒီအစီအရင်ခံစာကို ရေးသားသူ တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ Queensland တက္ကသိုလ်က Dr.Lennert Veerman က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။)
သတင်းတွေထဲမှာ ဖတ်ရသလောက်ကတော့ ဒါလောက်ပဲ ပါပါတယ်ခင်ဗျ။
ဟုတ်ကဲ့ lone သဘောပေါက်ပါပြီ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ….
ကွန်ပျူတာမထတမ်းသုံးရတဲ့လူတွေလည်း အတူတူပဲဆိုရင် တို့တွေတော့ အသက်တိုပြီ
ဒါဆိုရင်တော့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေ နေ့တိုင်းကြည့်တဲ့သူတွေတော့ ဒုက္ခဘဲ။ zawana ပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်တောင်ရောဂါတွေတော်တော်ရနေပြီ…။
ကွန်ပျူတာ ကြည်.တာနဲ. TV ကြည်.တာနဲ.ေ၇ာ အကျိုးသက်ေ၇ာက်မှုက အတူတူ ပဲလားဗျို. ။
သေပြီဆရာ။ အသက်ကတော့ တကယ်တိုပြီ။ TV တော့ကြည့်ဘူး။ ပိတ်ရက်ဆို တနေကုန်အခွေ ကြည့်တာ။
ကွန်ပြူတာတော့ တော်တော် သုံးဖြစ်နေတာ..
အသက်တိုတာထက်.. အနီးစပ်ဆုံး တွေးမိတာကတော့ မလှုပ်မယှက် ထိုင်နေတာ ကြာတော့ အဆီတွေစုပြီး ၀ လာမယ်။ အလေးချိန်ပိုလာမယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါ အနေနဲ့ နှလုံး သွေးတိုး ဆီးချို စတာတွေ ဖိတ်ခေါ်သလို ဖြစ်မယ်။ ဒါကြောင့် အသက်တိုမယ်။
တစ်နေ့မှာ ၁၄ နာရီလောက် တီဗီ (သို့မဟုတ်) ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ ထိုင်နေတာဆိုတော့ … အသက်တိုမှာ သေချာသွားပြီ …
အကြောင်းပြချက်ပါရင်တော့ သိပ်ကောင်းမှာဘဲ။ဒါပေမယ့် အသက်တိုမှာက ဘာကြောင့်မှန်းလဲ မသိရဘူးနော်။British journal of sports medicine ကိုရှာဖတ်ကြည့်ရမယ်ထင်တယ်နော်။